အမြစ်မကုန်သေးတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေနေဲ့ ပိုင်တံခွန် ကိ်ုယ်တိုင်ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် – Shwe Likes
အမြစ်မကုန်သေးတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေနေဲ့ ပိုင်တံခွန် ကိ်ုယ်တိုင်ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်
Shwe | March 20, 2022 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ် ကြီးရေ ပိုင်တံခွန် ကတော့ အာရှတစ် ခွင်မှာသာမက အနော က်နိုင်ငံေ တွထိပါ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် မင်းသားတစ်လက် ပါ။ လက်ချိုးရေလို ့ရတဲ့ကမ္ဘာေ ကျာ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနုပညာရှင်ေ တွထဲက တစ်ယော က်လို့တောင် တင် စားရမှာပါ။
မကြာသေးမီ ကလည်း စစ်ကောင်စီဖ မ်းဆီးချု ပ်နှောင်မှုကပြန်လည် လွတ်မြောက်လာ ခဲ့တာပါ။လွတ်မြောက် လာခဲ့ပြီးေ နာက်မှာတော့ သူ့ရဲ့အနုပည ယလှူပ်ရှားမှုတြွေ ပန်လည်စတင် ကာ ပရိသတ်နဲ့ပြန်လ ည်ထိေ တွ့ခဲ့တာပါ။
ဒီနေ့ မှာတော့ ”အသံတွေ ကြားရတယ် . . .ပုံရိပ်တွေလဲ မြင်ရတယ်. . .အကြိမ်ကြိမ် ဆွဲဖွင့်ကြည့်လ ည်းမင်းကေ တာ့ ထွက်မလာဘူး ။ ငါ့မှာတော့ သေဆုံးခြ င်းကိုခဏခဏ . . .ရေစက်ချပေးပေမ ယ့်အစွဲလန်း ကြီးလွန်းတဲ့ မင်းကဘယ်တော့မှ သာဓုမခေါ်ခဲ့ဘူး။
ဒါနဲ့များ မင်းရှိနေသေး တာ ဘာလို့ ငါ့ကိုခဏခဏ . . .သတိပေးနေရတာလဲ . . .#မကျွတ်လွတ်တဲ့ အလွမ်းငယ်( Psycho ) ( ၁၆. ၉ . ၂၀၂၁ )#ပိုင်တံခွန်”ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာတင်လာခဲ့တာပါ။
အနုပညာအ လုပ်တွေအပြ င်အမြဲလိုလိုကဗျာေ တွရေးတတ်ြ ပီး ပန်းချီတွေ​ဆွဲ​လေ့ရှိတဲ့ ပြည်သူချစ်ပို င်တံခွန်ကတော့ပြန် လည်အ သက်ဝင်ကာ ပြည်သူ့ရ င်ခွင်ထဲ ပြန်လည်ဝင်ေ ရာက်ခဲ့ပြီလို့​​​ဆိုရမှာပါ။
ပိုင်တံခွန်ရဲ့အ သက်ဝင်လွန်း လှတဲ့ကဗျာေ လးကိုဖတ်ပြီး ပရိသတ်တွေ ကတော့ ဝမ်းနည်းခဲ့ကြတာပါ။ ပရိသတ်တွေလည်း ခံစားရတဲ့ ခံ စားချက်လေးကို ဝေမျှခဲ့ပါဦးနော်။ Source: PaingTakhon
ပရိသတ္ ႀကီးေရ ပိုင္တံခြန္ ကေတာ့ အာရွတစ္ ခြင္မွာသာမက အေနာ က္နိုင္ငံေ တြထိပါ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေနတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ မင္းသားတစ္လက္ ပါ။ လက္ခ်ိဳးေရလို ့ရတဲ့ကမၻာေ က်ာ္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ အႏုပညာရွင္ေ တြထဲက တစ္ေယာ က္လို႔ေတာင္ တင္ စားရမွာပါ။
မၾကာေသးမီ ကလည္း စစ္ေကာင္စီဖ မ္းဆီးခ်ဳ ပ္ေႏွာင္မႈကျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာ ခဲ့တာပါ။လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ၿပီးေ နာက္မွာေတာ့ သူ႔ရဲ့အႏုပည ယလႉပ္ရွားမႈေႂတြ ပန္လည္စတင္ ကာ ပရိသတ္နဲ႔ျပန္လ ည္ထိေ တြ႕ခဲ့တာပါ။
ဒီေန႔ မွာေတာ့ ”အသံေတြ ၾကားရတယ္ . . .ပုံရိပ္ေတြလဲ ျမင္ရတယ္. . .အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆြဲဖြင့္ၾကည့္လ ည္းမင္းေက တာ့ ထြက္မလာဘူး ။ ငါ့မွာေတာ့ ေသဆုံးၿခ င္းကိုခဏခဏ . . .ေရစက္ခ်ေပးေပမ ယ့္အစြဲလန္း ႀကီးလြန္းတဲ့ မင္းကဘယ္ေတာ့မွ သာဓုမေခၚခဲ့ဘူး။
ဒါနဲ႔မ်ား မင္းရွိေနေသး တာ ဘာလို႔ ငါ့ကိုခဏခဏ . . .သတိေပးေနရတာလဲ . . .#မကၽြတ္လြတ္တဲ့ အလြမ္းငယ္( Psycho ) ( ၁၆. ၉ . ၂၀၂၁ )#ပိုင္တံခြန္”ဆိုတဲ့ ကဗ်ာေလးကို သူ႔ရဲ့လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာတင္လာခဲ့တာပါ။
အႏုပညာအ လုပ္ေတြအၿပ င္အျမဲလိုလိုကဗ်ာေ တြေရးတတ္ျ ပီး ပန္းခ်ီေတြ​ဆြဲ​ေလ့ရွိတဲ့ ျပည္သူခ်စ္ပို င္တံခြန္ကေတာ့ျပန္ လည္အ သက္ဝင္ကာ ျပည္သူ႔ရ င္ခြင္ထဲ ျပန္လည္ဝင္ေ ရာက္ခဲ့ၿပီလို႔​​​ဆိုရမွာပါ။
ပိုင္တံခြန္ရဲ့အ သက္ဝင္လြန္း လွတဲ့ကဗ်ာေ လးကိုဖတ္ၿပီး ပရိသတ္ေတြ ကေတာ့ ဝမ္းနည္းခဲ့ၾကတာပါ။ ပရိသတ္ေတြလည္း ခံစားရတဲ့ ခံ စားခ်က္ေလးကို ေဝမၽွခဲ့ပါဦးေနာ္။ Source: PaingTakhon
ကျွန်မတို့ လည်းပြေးပြီ ဆိုတဲ့ အဆိုတော် ယွန်းမြတ်သူ…….
ကိုရီးယား မှာ အလုပ်လုပ်ရင်း ကျောင်းတက်နေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ မျှဝေလာတဲ့ မင်းသမီးချောလေး နေခြည်ရွှန်းလဲ့